Xildhibaano katirsan Somaliland oo sheegay iney duulaan ku yihiin Garoowe, Shacabkana isaga?
Xilldhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somaliland ayaa ka hadlay tiro madaafiic ah oo la sheegay in ciidamo ka tirsan Puntland ay ku tuureen Aaga rayidka ka caagan ee Tukaraq, oo ay isku hor­fadhiyaan ciidamada labada dhinac.
Hoobiyayaasha oo aanan la hubin haddii ay khasaaro geysateen ayey Xildhibaanadu sheegeen inay ka bixin doonaan jawaab deg deg ah, iyagoo ku goodiyey in duulaan lagu qaadi doono xarunta Puntland ee Garoowe.
"Xitaa hadii aan dhinaceena [degaanada Somaliland] timaadaan waxba idin yeeli mayno. Kaliya ciidanka iyo inaga nooga dhex­baxa,” ayuu yiri mid kamid ah Xilldhibaanada Arbacadii hadlay.
"Sababta aanan talaabo u qaadin waxay ahayd inaan caalamka tusno inuu Gaas qaldan yahay. Shacabka Garowe waxaan u sheegaynaa inay ka guuraan magaalada waanu soo soconaa,” ayuu yiri Xilldhibaan kale.